Ciidanka NISA oo rasaas ku furay ciidan kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka NISA oo rasaas ku furay ciidan kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya
Ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta rasaas aad u culus isku weydaarsaday agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Is-rasaaseyntaasi ayaa ka dhacday bar-kontrool ah oo ay ciidanka NISA ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxayna is-rasaaseyntaasi bilaabatay kadib markii ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayeen inay dhinac maraan nidaamka baarista gaadiidka oo ay ciidanka NISA ka wadaan halkaasi.
Ciidanka NISA oo si aad uga shakiyay gaariga ay wateen ciidankii kale ee ka tirsanaa dowladda Soomaaliya ayaa ku amray inay gaariga joojiyaan, balse ay iyagane ka dhaga adeegeen, waxayna arrintaasi keentay in ciidankii NISA ay rasaas ku furaan gaarigii ay saarnaayeen ciidankii kale, islamarkaana uu halkaasi ka bilaawdo is-rasaaseyn muddo saacad ah socotay.
Dadkii ku sugnaa agagaarka goobta ay is-rasaaseyntu ka dhacday ayaa bilaabay inay goobta isaga kala cararaan, waxaana is-rasaaseyntaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay is-rasaaseyntaasi ayaa ku geeriyooday 1 askari, iyadoona 2 kale ay ku dhaawacantay.
Ma jirto hadal kasoo baxay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan is-rasaaseyntaan maanta dhex-martay ciidanka ka wada tirsan dowladda, waxaana haatan degan goobta ay is-rasaaseyntu ka dhacday.